Shikoku क्षेत्र!4प्रान्तहरूमा गर्न उत्तम चीजहरू - Best of Japan
आइको काजुरबाशी शिकोको जापानमा = शटरस्टक
पश्चिमी जापानको शिकोको टापुमा, बीचमा ठाडो र विशाल हिमाली क्षेत्र फैलिएको छ। यी पहाडहरू द्वारा विभाजित, त्यहाँ चार प्रान्तहरू छन्। यी प्रान्तहरु को प्रत्येक धेरै व्यक्तिगत छ। यदि तपाई शिकोकू टापुको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाई4चाखलाग्दो संसारको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ!
Shikoku को रूपरेखा
Shikoku मा स्वागत छ!
शिकोकामा टोकुशिमामा, ओवा ओडोरी (आवा नृत्य) हरेक गर्मी = शटरस्टकमा देखाईन्छ
शिकोको = शटरस्टकको नक्शा
शिकोकू जापानको चार टापु मध्ये एक हो। शिकोकू क्षेत्र जापानको चार प्रमुख टापुहरूमध्ये सब भन्दा सानो र कम जनसंख्या भएको क्षेत्र हो। यो टापु धेरै पहिलेदेखि नै चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। "शिकोकू" भनेको जापानी भाषामा चार देश हो।
प्रत्येक चार क्षेत्रहरु मा, एक अद्वितीय जीवन शैली संस्कृति विकसित भएको छ। शिकोकूको उत्तरपूर्वी भागमा रहेको टोकुशिमा प्रान्तमा जापानको सबैभन्दा प्रसिद्ध ग्रीष्म festivalतु अववा डान्स (आवा ओडोरी) पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। स्वादिष्ट उडोन (बाक्लो जापानी चाउचाउहरू) टोकुशिमाको पश्चिममा अवस्थित कागवा प्रान्तमा लोकप्रिय छ। उत्तरपश्चिममा एहीम प्रान्तमा प्रसिद्ध महलहरू र तातो स्प्रि .हरू छन्। यसैबीच, कोकोइ प्रान्तमा सिकिकोको दक्षिणी भागमा फैलिएको प्रशान्त महासागरको परिदृश्यले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
शिकोका पहाडहरू शिकागो टापु, जापान = शटरस्टकको बीचमा फैलिरहेका छन्
Shikoku क्षेत्र को जलवायु
केन्द्रमा अवस्थित सिक्कू पहाडहरूको प्रभावका कारण उत्तरी भाग र दक्षिणी भागमा शिकोको मौसम धेरै फरक छ।
उत्तरी क्षेत्र शीतोष्ण छ र धेरै पानी छैन। आंधीबाट धेरै क्षति छैन। यसको विपरित, दक्षिणी क्षेत्र हल्का छ, वर्षा वर्षा हुन्छ। अक्सर आँधीले प्रत्यक्ष हिट प्राप्त गर्दा कहिलेकाँही बाढीले क्षति पुर्‍याउँछ।
त्यहाँ Shikoku क्षेत्र को चार प्रान्तहरु को प्रत्येक मा एयरपोर्टहरु छन्। यदि तपाईं टोकियोबाट सिकोखुमा सर्नुभयो भने, तपाईंले यी एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
शिकोको उत्तरी क्षेत्र होन्शु संग तीन ठूला पूलहरूसँग जोडिएको छ। त्यसोभए, यदि तपाईं क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा आदि बाट सिकोखु यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं ओकियामा वा हिरोशिमा जानु पर्छ पहिले शिन्कन्सेनमा, त्यसपछि पुल पार गरेर शिकोकु जानुहोस्।
Shinkansen Shikoku मा संचालित छैन। त्यसो भए, तपाईं नियमित JR ट्रेन वा बस द्वारा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। चार प्रान्तहरू Shikoku पहाड श्रृंखला बीचमा विभाजित भएकोले, यो Shikoku भित्र जान समय लाग्नेछ।
अब, कृपया Shikoku क्षेत्र को प्रत्येक क्षेत्र मा जानुहोस्। तपाई कहाँ जान चाहनुहुन्छ?
टोकुशिमा प्रिफेक्चर तुलनात्मक रूपमा कोबे र ओसाका भन्दा नजिक छ। यो प्रान्त अवा नृत्य (अवा ओडोरी) को लागि प्रसिद्ध छ। त्यहाँ अरु अनौंठो दृश्यहरू पनि छन् जस्तै नरुटो भँवरो (नरुटो उजुशीयो), ओत्सुका म्यूजियम आर्ट, इया काजुरा ब्रिज।
टोकुशिमा प्रान्त सिकोकु टापुको कन्साई क्षेत्रबाट नजिकको क्षेत्र हो। टोकुशिमा प्रान्त गर्मीमा आयोजित हुन नृत्य (आवा ओडोरी) को लागि धेरै प्रख्यात छ। त्यहाँ अन्य आकर्षणहरू छन् जस्तै नरुटो भँवरो (नरुटो उजुशीयो) र ओत्सुका म्यूजियम आर्ट। यस पृष्ठमा, म सिफारिस गर्दछु ...
कागवा प्रान्त सिकिको टापुको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। यस प्रान्तमा अपतटीय टापुहरूको अद्भुत संग्रहालय छ। कागवा प्रिफेक्चर स्वादिष्ट उडोन (बाक्लो जापानी नूडल्स) को लागी पनि धेरै प्रख्यात छ।
कागवा प्रान्त सिकिको टापुको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। यो प्रिफेक्चर ओकायामा प्रान्तको विपरीत किनारमा सेतो इनल्यान्ड सागरमा सेतो ओहाशी पुल द्वारा बाध्य गरिएको छ, १२,12,300०० मिटर लम्बाई छ। त्यसोभए, तपाईं यस क्षेत्रमा जान स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अपतटीय टापुहरूमा ...
मत्सुयामा, जापानमा डोगो ओन्सेन। यो देशको सब भन्दा पुरानो तातो स्प्रि =्ग हो शटरस्टक
एहीम प्रिफेक्चर एक ठूलो क्षेत्र हो जुन शिकोोक टापुको उत्तरपश्चिममा फैलन्छ। धेरै पुरानो जापानी यहाँ छोडिएका छन्। माथिको तस्वीर मत्सुयामा शहरमा पुरानो तातो वसन्त सुविधा हो। हो, तपाई यहाँ नुहाउन सक्नुहुन्छ!
एहीम प्रिफेक्चर एक ठूलो क्षेत्र हो जुन शिकोोक टापुको उत्तरपश्चिममा फैलन्छ। धेरै पुरानो जापानी यहाँ छोडिएका छन्। यस क्षेत्रको केन्द्रमा रहेको मत्सुयामा शहरमा तपाईले नक्कल तातो वसन्त सुविधामा नुहाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मत्सुयामा महल पनि छ जहाँ पुराना काठका भवनहरू मत्सुयामामा रहन्छन्। यसको दक्षिण जानुहोस् ...
कोची महल टावर, कोची, कोच्चि, जापान = शटरस्टक
कोची प्रिफेक्चर शिकोको टापुको दक्षिणपट्टि अवस्थित छ। यहाँ साँच्चिकै सुन्दर नदीहरू, जंगली केपहरू, र प्रशान्त महासागरको दर्शनीय दृश्यहरूको साथ समुद्र तटहरू छन्।
कोची प्रिफेक्चर शिकोको टापुको दक्षिणपट्टि अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा शुद्ध नदीहरू, जंगली केपहरू, र प्रशान्त महासागरको दर्शनीय दृश्यहरूको साथ समुद्र तटहरू छन्। जापानमा धेरै युवाहरू यस वातावरणको लागि आतुर छन् र कोच्चिमा यात्रा गरिरहेका छन्। यदि तपाईं कोच्चि जानुहुन्छ, तपाईं निश्चित रूपमा ...